Taxaddarrada ku saabsan alxanka birta ka samaysan bir birta ah - Shiinaha Foshan Hermes Steel
Taxaddarrada ku saabsan alxamida bir bir ah oo bir la huwiyay ah
Saxanka birta ah ee birta ah ee aan xarka lahayn wuxuu ka kooban yahay laba nooc oo taarikada birta ah, oo ay ku jiraan xirxirida (birta aan lahayn) iyo lakabka salka (birta kaarboon, birta dahaarka yar). Maaddaama ay jiraan laba walxood oo aasaasi ah oo ah birta loo yaqaan 'pearlite steel' iyo austenitic steel 'marka la alxamayo birta birta ah ee birta ah, alxanka saxanka birta ah ee la huwiyay ayaa iska leh alxanka birta aan isku midka ahayn. Sidaa darteed, tallaabooyinka hannaanka u dhigma waa in la qaadaa inta lagu jiro hawsha alxanka si aan loo buuxin oo keliya shuruudaha xoogga ee qaab dhismeedka alxanka ee lakabka salka, laakiin sidoo kale loo hubiyo iska caabbinta daxalka ee lakabka. Haddii hawlgalku khaldan yahay, wuxuu yeelan doonaa cawaaqib xumo. Taxaddarrada gaarka ah inta lagu jiro alxanka waa sida soo socota:
1, usha alxanka oo isku mid ah looma adeegsan karo in lagu qoro qaybaha birta isku dhafan ee birta ah. Qaybaha alxanka isku dhafan ee birta ah, waa lagama maarmaan in la buuxiyo shuruudaha xoogga ee qaab dhismeedka alxanka ee lakabka hoose iyo in la hubiyo iska caabbinta daxalka ee dahaadhka. Sidaa darteed, alxanka birta birta ah ee birta ka sameysan waxay leedahay gaar ahaaneed. Lakabka salka iyo lakabka salka waa in lagu dhajiyaa birta kaarboonka iyo koronto-yarta birta daawaha ah oo u dhigma walxaha lakabka salka, sida E4303, E4315, E5003, E5015, iwm; lakabka gogosha, kordhinta kaarboonka waa in laga fogaadaa. Sababtoo ah kororka kaarboonka alxamida ayaa si weyn u yareyn doonta iska caabinta daxalka ee qaybaha biraha isku dhafan ee birta ah. Sidaa darteed, alxanka dhejiska iyo xoqidda waa inay doortaan koronto u dhiganta qalabka wax lagu dhejiyo, sida A132 / A137, iwm; alxanka lakabka kala guurka ee isgoyska lakabka salka iyo xoqidda waa inuu yareeyaa saameynta kala-baxa ee birta kaarboon ku sameysanta isku-darka birta birta ah iyo kaabaya habka alxanka Gubashada luminta isku-dhafka alloy. Noocyada korantada ee Cr25Ni13 ama Cr23Ni12Mo2 oo leh chromium sare iyo maadada nikkel ayaa la isticmaali karaa, sida A302 / A307.
2. Wixii alxamid ah ee saxanka birta ah ee birta ah ee birta ah, qarka qaldan waa inuusan ka badnaan qiimaha la oggol yahay (1mm). Taarikada birta ah ee aan xarka lahayn ayaa badanaa ka kooban lakab hoose iyo lakab gogol xajmi leh oo dhumucdiisuna tahay 1.5 illaa 6.0 mm oo keliya. Iyadoo la tixgelinayo marka lagu daro ku qanacsanaanta aaladaha farsamooyinka ee qaybaha, qaybaha birta isku dhafan ee birta ah ayaa sidoo kale u baahan inay hubiyaan iska caabbinta daxalka ee dahaadhka ee la xidhiidha dhexdhexaadka wax daaqaya. Sidaa darteed, marka la isku keenayo alxamida, waxaa loo baahan yahay in la waafajiyo lakabka gogosha salka u ah, cirifka lakabku waa inuusan ka badnaan 1mm. Tani waxay si gaar ah muhiim u tahay marka la isku xidhayo taarikada birta ah ee birta ah ee qaro weyn leh. Haddii isku dheelitir la'aanta udhaxeysa lakabyada xirashada ay aad u ballaaran tahay, alxanka xididka lakabka salka ayaa dhalaali kara qaar ka mid ah birta birta ah, taas oo kordhinaysa walxaha isku darsamaya birta ee alxanka ee xididka lakabka salka, taasoo keenaysa in alxanka uu noqdo adag oo jajaban, isla mar ahaantaana, birta birta ah ee iskula jirta badhida waa la khafiifiyay. Dhumucdu waxay yareyn doontaa nolosha adeegga, waxay saameyn ku yeelan doontaa tayada alxanka ee lakabka gogosha, waana adag tahay in la hubiyo iska caabbinta daxalka ee dhismaha alxanka ah.
3, waa gabi ahaanba waa mamnuuc in alxanka lakabka kala guurka ama alxamida alxanka alxanka leh ee walxaha alxanka ah ee lakabka salka alxanka: isla mar ahaantaana, ka hortag walxaha alxanka in si khaldan loo isticmaalo marinka alxanka ee lakabka kala guurka alxanka iyo lakabka salka.
4. Marka sheyga alxanka lakabka salka loo isticmaalo in lagu alxameeyo lakabka dhinaca gogosha, xalka nuuradda waa in lagu dahaadhaa gudaha 150mm labada dhinac ee jeexdin si loo ilaaliyo si looga hortago in walxaha guntinta lakabka salka ahi uu ku dheganaado dusha sare ee ahama inta lagu jiro hawsha alxanka. Filimka oksaydhka dusha sare wuxuu saameeyaa iska caabinta daxalka ee birta isku dhafan ee birta ah. Waxyaabaha lagu buufiyo ee ku dhegan waa in si taxaddar leh loo nadiifiyaa.
5. Xididdada xidid ee lakabka salka ayaa koronto koronto alxanka qaata. Si loo yareeyo kala-baxyada walxaha isku-dhafka ah ee hoos yimaada xaaladda hubinta gelitaanka, saamiga isku-darka waa in la yareeyaa. Waqtigan, xawaaraha alxanka yar iyo xawaaraha alxanka dhaqso ayaa loo isticmaali karaa. U oggolow lulid dhinaca ah. Alxanka xirmooyinka waa inuu doortaa gelinta kuleylka yar yar, si waqtiga deganaanshaha ee heerkulka halista ah (450 ~ 850 ℃) uu u ahaado mid ugu gaaban sida ugu macquulsan. Alxanka ka dib, biyaha qabow waxaa loo isticmaali karaa qaboojinta degdegga ah.
6, haddii birta birta ah ee birta ah la hubo inay leedahay cilado delamination ka hor inta aan la alxamayn, alxamid lama oggola. Delamination waa in laga saaraa marka hore, alxamida dayactirka (ie, alxanka guud), iyo alxamida dayactirka ka dib.
7. Qalab gaar ah waa in loo isticmaalaa si loo nadiifiyo lakabka salka iyo labada dhinac ee gogosha. Lakabka salka waa inuu isticmaalaa burushyada birta ah ee birta kaarboonka ah, xirxirayaashuna waa inay isticmaalaan burushyada birta birta ah ee birta ah.